Ny fampiharana meme efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana meme tsara indrindra ho an'ny Android
Memes dia malaza be. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahita azy ireo amin'ny pejy web marobe isika ary indrindra amin'ny tambajotra sosialy. Ka, mpampiasa maro no maniry ny hanana azy ireo amin'ny findainy Android koa. Ny ampahany tsara dia ny fananantsika fampiharana izay manampy antsika hamorona ny meme antsika manokana. Androany dia hiresaka momba ireo rindranasa ireo izahay.
Amin'ny tranga maro dia hitantsika fa maro amin'ireo rindranasa ireo no manjary manjavona rehefa afaka kelikely avy amin'ny Play Store. Na dia asehonay anao eto ambany aza ireo sasany amin'ireo malaza sy voaorina. Ka antenaina fa ho afaka mandritra ny fotoana maharitra amin'ny Android izy ireo.
Ka manantena izahay fa hanampy anao ireo rindranasa meme ireo. ho an'ireo rehetra mitady fomba tsara hananana ny meme rehetra. Ho fanampin'izay, afaka mitady meme amin'ny tambajotra na tambajotra sosialy ihany koa izahay.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo rindranasa amin'ity karazana ity izay efa nisy elaela indrindra ho an'ny Android izahay. Mety maro aminareo no mahalala azy na nametraka azy. Amin'io lafiny io dia mihevitra izy fa tena azo itokisana izy ary manana habetsahana betsaka azo ampiasaina, indrindra ireo malaza indrindra. Ka angamba tsy ilay fampiharana no manaraka ny fironana indrindra, saingy loharanom-pahalalana meme azo antoka satria manana vola be dia be izy ireo. Inona koa, manana ny fahafaha-mamorona meme anay manokana amin'ilay fampiharana izahay. Azontsika atao ny mizara azy ireo amin'ny namantsika etsy ambany amin'ny karazana haino aman-jery rehetra.
Memedroid - Memes App ary Meme Generator amin'ny teny Espaniôla
Ity fampiharana faharoa amin'ny lisitra ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny lisitra. Inona koa, mazàna dia mandray fanavaozana vitsivitsy, noho izany dia manana vaovao foana na fanatsarana sasany amin'ny ankapobeny izahay. Manana meme maro be hita ao anatiny izahay ary manana ihany koa ny mety hanampiana ny sarinay manokana. Ka ho afaka hamorona meme izay 100% am-boalohany sy ny noforonintsika manokana isika. Avy eo isika dia afaka mizara ny zavatra noforoninay tamin'ny namana amin'ny tambajotra sosialy na mailaka. Ary koa, ireo sary dia tsy misy mari-drano. Tsotra ny famolavolana, noho izany isika dia afaka mamorona ny meme antsika amin'ny fahatsorana tanteraka.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia toy ny tamin'ny tranga teo aloha aza dia manana fividianana sy dokam-barotra ao anatiny izahay. Fividianana izy ireo hanesorana ireo doka amin'ny fampiharana.
Fahatelo, hitantsika ity rindranasa hafa ity, izay fantatra ihany koa ary efa ela no nisy tamin'ny Android. Ny fiasan'ity fampiharana ity dia mitovy amin'ny teo aloha. Manana tranomboky meme be dia be izahay ary manana ny fahaizana mampiditra ny sarinay ihany koa. Amin'izany no ahafahantsika mamorona ny volantsika manokana amin'ny fotoana rehetra. Ny fizotry ny famoronana dia tena tsotra, satria manana endrika tsotra izy io. Ka ho ahazoana aina tokoa ho antsika ny mamorona meme-ny antsika. Avy eo isika dia afaka mizara azy ireo miaraka amin'ny namana amin'ny haino aman-jery mahazatra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ao anatin'ilay fampiharana no ahitantsika ny doka, izay amin'ny tranga sasany dia mety hanelingelina.
Mematic - Ilay Meme Maker
Hofaranantsika ity fampiharana ity, izay hitan'ny maro ho iray amin'ireo tsara indrindra azo alaina ao amin'ny Play Store. Fampiharana tena feno izy io. Manana maodely meme 700 mahery izahay ao anatiny, izay manome safidy maro ho antsika rehefa mamorona ny meme antsika manokana. Ho fanampin'izany, afaka miditra amin'ny sarintsika manokana isika ary amin'izany dia mamorona ny zavatra noforonintsika manokana amin'ny fotoana rehetra. Ny famolavolana ny fampiharana dia tena tsotra, Ka tsy hanana olana ianao rehefa mamolavola sy mamorona meme anao manokana.
Ny fandefasana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android dia mitentina 2,49 euro. Na dia toy izany aza dia tsy manana fividianana na dokam-barotra ao anatiny isika. Ka raha hampiasainao be dia be io dia vidiny azo ekena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana meme tsara indrindra ho an'ny Android
ora quin dia hoy izy:
Frinkiac) ao amin'ny magazay an-tsehatra dia rindrambaiko tsara ihany koa hamoronana meme miorina amin'ny fizarana ny simpsons.
Mamaly amin'ny ora ora
Ny LG G7 ThinQ dia hanana bokotra manokana ho an'ny Google Assistant
Toyota dia tsy hampihatra ny Android Auto amin'ireo maodeliny satria mety hitranga amin'ny fiainana manokana izany